» को बन्छ नेपाल आईडलको तेस्रो विजेता ?
को बन्छ नेपाल आईडलको तेस्रो विजेता ?
११ भाद्र २०७७, बिहीबार २०:३०
चन्द्र घलान,मकवानपुर, ११ भदौ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ को फाईनल यसै साता हुँदैछ । अहिले फाईनलमा पुगेका ३ प्रतियोगीहरु सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल र किरण कुमार भुजेल फाईनलको तयारी गरिरहेका छन् । साथै दर्शकहरु पनि उनीहरुलाई खुलेर सपोर्ट गरिरहेका छन् । शुक्रबार बिहानसम्म चल्ने भोटिङमा कसले बाजी मार्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारका रुपमा उभिएका यी तिनै जना प्रतियोगीहरु एकसाएक छन् । उनीहरुमध्ये कुनै एक जना प्रतियोगी नेपाल आईडल बन्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन तर तिनै जनाका केही खास कुराहरु पनि छन् जसले उनीहरु ३ जनालाई एकअर्काबाट बिल्कुलै फरक बनाउँछ ।
आईडल दाबेदारका रुपमा उभिएकी सज्जा चौँलागाई पहिलो महिला नेपाल आईडल बन्नसक्ने अवस्था पनि छ । अनि धेरै श्रोता दर्शकको पनि साथ उनलाई छ । हालैका दिनमा बजारमा आएका उनका नयाँ गीतहरुले पनि उनी गायनकलामा कति सम्भावना बोक्छिन् भन्ने कुरालाई थप उजागर गरिदिएको छ । उनका गीतहरु अहिले हिट भएका छन् । नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जितेकी सज्जाले फाईनलसम्म पुग्दा १६ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । सज्जाले ५ वटा रेक्सपेक्ट पर्फोमेन्स अवार्ड, ३ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड र ८ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–
त्यस्तै नेपाल आईडलको दाबेदारीमा कडा टक्कर दिने अर्का प्रतियोगी हुन् प्रविण बेड्वाल । नेपाल आईडलको स्टेजमा संगीतका उस्ताद भनेर चिनिएका प्रविणको सामाजिक कार्य र सांगितिक यात्रालाई पनि दर्शक श्रोताले नजिकबाट नियालेका छन् । दर्शकहरुले उनलाई नेपाल आईडल बनाउनुपर्ने कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट र कमेन्टहरु पनि गरिरहेका छन् । हालै बजारमा आएका उनका गीतहरुले पनि निक्कै चर्चा पाउन सफल भएको छ । प्रविणले नेपाल आईडलको फाईनलसम्म आईपुग्दा १२ वटा अवार्ड जितेका छन् । प्रविणले ८ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र ४ वटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स आफ द विक अवार्ड जितेका छन् । उनले दुई पटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल आईडलको स्टेजमा संगीतका उस्ताद भनेर चिनिएका प्रविण बर्दिया निवासी हुन् । उनी नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगीहरु मध्येका एक हुन् । प्रविण नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका छन् । उनी २३ वर्षका छन् । बुटवल अडिसनबाट छनौट हुँदै फाईनलको यात्रा तय गरेका प्रविणले सँगीत विषयमा नै स्नातक गरेका छन् ।
कक्षा १० सम्म गाउँमा नै अध्ययन गरेका प्रविणले त्यसपछि काठमाडौँको बसाई सुरु गरे । काठमाडौँ आएर त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका प्रविण पछि संगीत विषयमा नै अध्ययन गर्न भारतको तमिलनाडुमा पुगे । त्यहाँबाट नै उनले संगीतमा स्नातक गरेका हुन् । स्नातक पश्चात ‘जात्रा’ नामक ब्याण्डमा आवद्ध भएका उनले बुवाको आर्मी बनाउने सपनालाई त्यागेर संगीतमा लागेका थिए । संगीतलाई छनौट गर्दै घर छाडेका प्रविण संगित क्षेत्रमा लागेको उनको परिवारलाई सुरुमा राम्रो लागेको थिएन । तर अहिले उनको परिवार पनि खुशी छन् । उनका केही गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् ।
आईडलका अर्का दाबेदार हुन् किरण कुमार भुजेल । वाईल्ड कार्ड राउण्ड जितेर फाईनलसम्म आईपुगेका किरणले नेपाल आईडलको फाईनलसम्म आईपुग्दा ६ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड, एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र एउटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड जितेका छन् । उनले वाईल्ड कार्ड राउण्ड सहित २ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण वि.सं. २०६५ सालमा एसएलसी सकाएपछि काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् । उनका विभिन्न गीतहरु चर्चामा छन् ।